Qasaali: Xujadii Islaamka Q.3aad (WQ: Cabdirisaaq Cabdiraxmaan Xasan Rakuub) - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Qasaali: Xujadii Islaamka Q.3aad (WQ: Cabdirisaaq Cabdiraxmaan Xasan Rakuub)
• Faa’dada ugu weyn ee qof kasta oo damiirkiisu noolyahay ka dhaxlayo Qasaali ayaa ah in kolku isdareemay in magaciisa caanbaxay, hantidiisa badan, sumcaddiisuna meel sarraysa gaadhay ay qabgelisay in uu ka dhex dhaqaaqay intaasba. Sababta uu tallaabadaa u qaadayna ay ahayd in yoolkiisu ka weynaa quudkiisa.
• Maalintii kaalintiisa aqooneed loo baahnaa in aanu danaysan.
• In uu aqoonta lafteeda u baranjiray in uu aragtiyaha khaldan ummadda uga saxo. Tusaale waxa kaaga filan in uu muddo wakhti siiyey barashada falsafadda. Uma uu baran in uu ku bariseeyo se leexin bulsheed oo xilligaa jirtay ayaa ku kelliftay in uu barto isaga oo ummaddiisa u damqanayey.
• In uu lahaa aragtiyo badan oo dunida saameyn ku yeeshay, taas oo muujinaysa in uu dedaal sameeyey maskaxdana uu tuujiyey.
• Sida uu isugu jaan-gooyey noloshiisa iyo curintiisa. Muddada uu noolaa waa mid aad u kooban haddana raadkiisu waa mid aad u weyn.
• Wuxu ahaa xalaal miirad dhab ah, oo aanay adduunyadu gacantiisa dhaafin.
• Fanniyada aqooneed waa ay kooban tahay mid aanu wax ka qorin, taas oo muujinaysa heerkiisa aqooneed. Waxa taas dareemaya qof kasta oo daraaseeya Qasaali, waxa ayna ku carinaysaa ama uu ogsoonaannayaa in aanu aqoonta maaddo kaliya ku koobin barashadeeda ee uu awood u leeyahay in uu maaddooyin kala duwan baran karo caalimna ku noqon karo.